Telecom's cheapest data pack, 10 GB for only Rs 200 - TechPana Tech News Nepal
२०७८, १२ श्रावण मंगलबार
ह्वावेको बहुप्रतिक्षित फ्ल्यागशिप सिरिज 'पी५०' बिहीवार सार्वजनिक हुँदै
१२ जीबी र्‍याम भएको 'वनप्लस नोर्ड २' नेपाली
२० वर्षपछि नयाँ अवतारमा सार्वजनिक भयो नोकिया ६३१०
गुगलको १५ जीबी फ्री स्टोरेजलाई व्यवस्थापन गर्न जान्नैपर्ने
पब्जीमा नेपाली टिमलाई ऐतिहासिक सफलता, विश्वस्तरीय प्रतियोगिताबाट जित्यो
सिमकार्ड लिन अब नागरिकता र फोटो बोकेर हिँड्नु
अब ब्लुबुक साथमा बोक्नु नपर्ने, क्यूआर कोड स्क्यान
भोलिदेखि अनलाइनबाटै ब्लुबुक नवीकरण गर्न सकिने, यस्तो छ
होन्डाको नाममा म्यासेन्जरमा 'स्पाम' आतंक, झुक्किएर पनि नखोल्नुहोला
२४ घण्टाभित्र नेपालको बैंकिङ सिस्टम ‘ह्याक’ गर्ने धम्की,
सिजी नेटको पहिलो सेवा विस्तार, अब थप यी
गुगलमा 'फटाहा' सर्च गर्दा किन आउँछ प्रधानमन्त्री देउवाको
ई–सिम ल्याउँदै नेपाल टेलिकम, एक वर्षमा कूल ८०
शुक्रबार, भाद्र १९, २०७७
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आकर्षक डेटा प्याक सञ्चालन गरिरहेकाे छ । कम्पनीले कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा घरभित्रै बस्न आग्रह गर्दै स्टे कनेक्टेड प्याक ल्याएको हो ।
टेलिकमले सार्वजनिक गरेको यो डेटा प्याकमा प्रयोगकर्ताले २०० रुपैयाँमै १० जीबी डेटा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दुई जीबी नियमित प्याकेजमा कम्पनीले आठ जीबी डेटा फोरजी नेटवर्कका लागि बोनस स्वरुप उपलब्ध गराएको छ ।
सात दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने यो प्याकेजको डेटा मध्ये आठ जीबी फोरजी नेटवर्कमा बोनसको रुपमा उपयोग गर्न सकिने र बाँकी दुई जीबी जुनसुकै नेटवर्कमा प्रयोग गर्न मिल्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
त्यस्तै कम्पनीले सय रुपैयाँमै चार जीबी डेटाको अर्को प्याकेज समेत ल्याएको छ । जसमध्ये एक जीबी जुनसुकै नेटवर्कमा प्रयोग गर्न मिल्नेछ भने बोनस स्वरुप प्राप्त हुने तीन जीबी डेटा फोरजी नेटवर्कमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्नेछछ । यसरी प्राप्त चार जीबी डेटा पाँच दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
स्टे कनेक्टेड प्याक अन्तर्गतको डेटा त्यसको अवधिभर जुनसुकै बेला जुनसुकै सेवाका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीका प्रयोगकर्ताले *1415# डायल गरी यी दुवै डेटा प्याकेज रोजेर खरिद गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीको यो प्याकेज यस अघिको लकडाउनमा जारी अफरकै निरन्तरता स्वरुप उपलब्ध छ ।
एक वर्षसम्म सित्तैमा फाइभजी अनुभव गर्न पाइने, यस्तो छ परीक्षण कार्यविधि
काठमाडौं । प्रयोगकर्ताले परीक्षणभर निःशुल्क फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने प्रावधानसहित कार्यविधि पारित भएको छ ।
सिक्सजी प्रविधिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भूमिका कस्तो होला ?
काठमाडौं । विश्वभरका मोबाइल सेवाप्रदायकहरू फाइभजी सार्वजनिक गर्ने र त्यसको विस्तारमा केन्द्रित हुने होडमा छन्
नेपाल टेलिकम बन्यो धेरै कर बुझाउने दूरसञ्चार कम्पनी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धेरै कर तिर्ने शीर्ष तीन कम्पनीको सूचीमा दुई दूरसञ्चार
डिम्याट खाता सञ्चालकका लागि नयाँ सफ्टवेयर आउँदै, के के हुन्छन् सुविधा ?
काठमाडौं । डिम्याट खाता सञ्चालक (डीपी) का लागि चाँडै नै नयाँ सफ्टवेयर आउने भएको छ
अब ब्लुबुक साथमा बोक्नु नपर्ने, क्यूआर कोड स्क्यान गरे पुग्ने
भोलिदेखि अनलाइनबाटै ब्लुबुक नवीकरण गर्न सकिने, यस्तो छ तयारी
२४ घण्टाभित्र नेपालको बैंकिङ सिस्टम ‘ह्याक’ गर्ने धम्की, आतंक फैलाएको भन्दै कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकको चेतावनी
होन्डाको नाममा म्यासेन्जरमा ‘स्पाम’ आतंक, झुक्किएर पनि नखोल्नुहोला यस्तो लिङ्क
सिमकार्ड लिन अब नागरिकता र फोटो बोकेर हिँड्नु नपर्ने
विजय शाहीबारे फेसबुकमा गलत सामग्री पोस्ट
नागरिक एपबाटै अब मेगा बैंकमा खाता खोल्न सकिने
टेकपाना टेक अपडेट, १२ साउन, २०७८
अमेजनले क्रिप्टो लक्षित रोजगार घोषणा गरेसँगै बढ्यो बिटक्वाइनको मूल्य
विच्याटमा नयाँ रजिस्ट्रेसन रोकियो